Baidoa Media Center » Dhegayso malaaq Xasan Cumar iyo suldaan Warsame Suldaan Caliyow Ibrow oo lagu dheganyahay.
Dhegayso malaaq Xasan Cumar iyo suldaan Warsame Suldaan Caliyow Ibrow oo lagu dheganyahay.
August 14, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Suldaanka beehs Jiido ee Digil iyo Mirifle ayaa waxaa dacwado kusoo oogay dad katirsan beesha Jiido ayada oo lagu eedeeyay inuu adeerkiis Saalim Caliyow Ibrow kusoo daray liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Dhanka kale, malaaqa beesha Xariin ayaa waxaa soo eedeeyay siyaasiyiin katirsan beesha, malaaq Xasanow Cumarow Xasan ayaa lagu haystaa inuusan wadatashi la yeelan beesha Xariin kahor intii aanu qorin magacyada xildhibaanada cusub, balse malaaq Xasan Cumar ayaa eedayntaas iska diiday isaga oo ku adkeystay go’aankiisa.
Hoos ka dhegayso eedaymaha iyo is difaaca.
HALKAAN KU DHUFO SI AAD U DHEGAYSATID1